MUQDISHO, Soomaaliya - Bankiga Aduunka [World Bank] iyo Dowladda Soomaaliya ayaa heshiis ku saabsan deeq lacageed oo dhan 80 milyan oo Dollar ku kala saxiixday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, xili oo maalinta Arbacadda ah.
Wasiirka Maaliyadda, Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo heshiiskaan qalinka ku jiiday ayaa shaaciyay in lacagta oo lagu talagay dib uhabaynta hanaanka maaliyadda ay qayb ka tahay 140 milyan oo Bankiga ubalanqaaday dowlada.
Dr Bayle ayaa cod dheer ku qeexay in lacagta oo aanan ahayn mid dayn ah ay ku muteysteen kadib shaqo wanaagsan oo ay qabteen, gaar ahaan geedi usocodka daynta looga cafinayo wadanka.
“Lacagtani waa qayb ka yahay 140 milyan oo Dollar oo mashruuc ah taasi oo uu Bankiga aduunka noo balanqaaday, waxaanu u aragnaa inay tahay abaalmarin,” ayuu yiri Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya.
Heshiiskaan ayaa kusoo aadaya xili dhowaan Midowga Yurub uu xukuumada ugu tabarucay 100 milyan oo Yuuroo.
“Dhamaan waxyaabihini waxay muujinayaa shaqada fiican oo ay qabteen dadka iyo dalka Soomaaliyeed. Xaqiiqadu waxay tahay in hadii aan wadaan kusii socono aan gaari karno meel kasii fog, iyo inaan lajaan-qaadno caalamka,” ayuu xusay.
Ugu dambeyntii, Wasiirka ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in dalka laga cafiyo daymaha lagu leeyahay, inkasta oo uu qiray inay hortaalo shaqo aad u adag, loona baahan yahay dulqaad fara badan.
Soomaliya 25.10.2018. 01:07
Naqshadda Lacag Cusub oo Soomaaliya loo soo daabacayo [SAWIRRO]
Soomaliya 09.06.2018. 22:11
DFS oo lagu eedeeyay inay kasoo horjeedo midowga Galmudug iyo Ahlu Sunna
Soomaliya 28.05.2018. 19:16
Khilaafka Khaliijka iyo saameyntiisa gurmadka qaraxii Zoobe
Soomaliya 11.10.2018. 21:39
Farmajo oo ku dhawaaqay Gollaha Dhaqaalaha Qaranka
War Saxaafaded 25.07.2018. 00:27
Mashruuc horey musuq-maasuq loogu hakiyay oo dib loo billaabey
Soomaliya 28.11.2018. 10:02